पोखरामा आहा रारा गोल्डकप शुरु, सहाराको उत्कृष्ट कमब्याकमा विजयी शुरुवात – Pokhara News by Ganthan
पोखरामा आहा रारा गोल्डकप शुरु, सहाराको उत्कृष्ट कमब्याकमा विजयी शुरुवात
प्रकाशित मार्च 5, 2020
पोखरा, २२ फागुन / दुई पटक पछि परेको अवस्थालाई उल्ट्याउँदै आयोजक सहाराले ए डिभिजन क्लब बिग्रेड ब्वाईजको चुनौतिलाई ३–२ गोलले पन्छाउँदै १८ औं संस्करणको आहा रारा गोल्डकपको क्र्वाटरफाईनल यात्रा तय गरेको छ । अतिरिक्त समयमा त्रिदेव गुरुङको उत्कृष्ठ हेडिङ गोल गरेपछि बिग्रेड ब्वाईजको क्र्वाटरफाईनल सपना पहिलो खेलबाट विट मार्यो । सहाराले अबको भेट नेपाल पुलिस क्लबसँग निधो गरेको हो ।
पहिलो सहभागितालाई अविष्मरणीय बनाउने ध्याउन्नमा रहेको बिग्रेड ब्वाईज क्लबले १८ औं आहा रारा गोल्डकपको उदघाटनमा सुखद शुरुवात गर्ने योजना अतिरिक्त समयमा आएर रोकिन पुग्यो । कमब्याक गर्दै उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको सहाराले बराबरी गोल फर्काएको खुशीयाली भने एकमिनेट भन्दा बढी टिकाउन सकेन् ।
अनिल गुरुङले प्रहारलाई सहारा क्लबको डिफेन्सबाट रिफ्लेक्ट बललाई गोलकिपरले पन्च गर्ने प्रयास गरे । एक हातले पञ्च गरेपनि पेनाल्टी बक्सभित्र खसेको बललाई ६२ औंं मिनेट लेफ्ट विङ्गर विजय गुरुङले सेकेण्डबार च्याप्दै गोल गरेपछि सहाराको क्र्वाटरफाईनल सम्भावना कमजोर हुने संकेत देखिएको थियो ।
पहिलो हाफ गोलरहित टुंगियो । दोस्रो हाफमा गोल सम्भव हुन पुग्यो । ५८ औं मिनेटमा बिग्रेड ब्वाईजले गोलको खडेरी तोड्यो । अफ्रिकन खेलाडी कजिम ए. बुसारीको पासमा सहाराका खेलाडीको मार्किङमा नरहेका राजेश परियारले ‘क्लिनिकल्ली फिनिसिङ’ गर्दै अग्रता दिलाए । उनको अग्रता पनि लामो समय टिकाउन भने बिग्रेड ब्वाईज असमर्थ बन्यो । ६१ औं मिनेटमा सहाराले पाएको फ्रिकिकलाई सदुपयोग गर्दै बराबरी गोल फर्काउँदै आयोजकको आशा फेरी जाग्यो । कमल थापाले हानेको फ्रिकिकलाई अफ्रिकन खेलाडी सेई उरिचले हानेको हेडिङ गोलमा परिणत भएपछि सहारा खेलमा फर्कियो ।
दश खेलाडीमा समेटिएको आयोजकले दुई पटक पछि परेको अवस्थामा खेलमा फर्कियो । २६ मिनेटमा किरण रायमाझीले रातो कार्ड खाँदै बाहिरिएपछि सहाराले दश खेलाडीमा आफनो अस्थित्वलाई बचाईराख्न कडा संघर्ष गरिरह्यो । ७८ औं मिनेटमा त्रिदेव गुरुङले गोल गर्दै सहारालाई फेरी एकपटक आशालाई जोगाई राखे । उरिचको लामो पासलाई सदुपयोग गर्दै गोल गरेपछि सहाराले खेलमा बराबरीको कमब्याक गर्यो । त्यसभन्दा अघि बिग्रेड ब्वाईजको महत्वपूर्ण अवसर खेर गयो । बुसारीको प्रहार फष्टबारमा लागेर रिवाउण्ड हुन पुग्यो ।
निर्धारीत समय २–२ गोलको स्थितिमा टुंगिएको थियो । १५ मिनेटको खेल थप गरियो । थपिएको १५ मिनेटको पहिलो हाफ गोलरहितमा टुंगियो । दोस्रो हाफको ५ मिनेट वितेपछि सहाराले पाएको फ्रिकिकलाई सदुपयोग गर्दै निर्णायक गोल निकाल्यो । लङ फ्रिकिक बललाई त्रिदेवले गरेको हेडिङ बिग्रेड ब्वाईजका गोलकिपर अगाडि बढ्दा बचाउ गर्ने सामथ्र्य राख्नै सकेनन्, अन्तत बलले जाली चुम्यो ।
आयोजकले खुशीयाली मनाउँदा बिग्रेड ब्वाईजले पहिलो सहभागितालाई अविस्मरणीय बनाउनबाट चुक्यो । सहारा क्लबको आयोजना तथा हिमश्री फुड्सको मुख्य प्रायोजनमा आयोजित गोल्डकपको शुक्रबारको खेल शसस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले झापा ११ सँग खेल्ने छ ।
#आहा ! रारा गोल्डकप#आहा रारा#आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प
कास्की प्रशासनः होली कार्यक्रम गरेर नमनाउन, मेला, भेला नगर्ने अनुरोध
समुद्रमा डुबेर अष्ट्रेलियामा पोखराका नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु
मनाङ मस्र्याङदीलाई छैटौ पटक आहा राराको उपाधि (को को बने उत्कृष्ट सहित)
आहा रारामा पुलिस र मनाङको छैटौं किर्तिमान उपाधि लक्ष्य
मनाङ मस्र्याङ्दी आहा राराको फाईनलमा
आहा राराः पहिलो हाफ सकिदा २–१ ले मनाङको अग्रता